लकडाउनले नछेकेको आस्था : साउनको पहिलो सोमबार पशुपतिमा चहलपहल – Sandesh Munch
लकडाउनले नछेकेको आस्था : साउनको पहिलो सोमबार पशुपतिमा चहलपहल
July 20, 2020 118
काठमाडौं । साउनको पहिलो सोमबार पशुपतिनाथको मन्दिरमा बिहानैदेखि भक्तजनहरुको चहलपहल देखिएको छ । महिनामा साउन र बारमा सोमबार भगवान् शिवको बार भएकाले यस दिनमा शिवजीको पूजा आराधना एवम् दर्शन गर्नाले मनोकामना पूरा हुन्छ भन्ने धार्मिक विश्वासमा भक्तजनको चहलपहल बढेको हो ।
साउनको सोमबार शिवलाई शुद्ध जल चढाएर खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता छ । साउनको महिना शिव भगवानको प्रिय महिना पनि हो। नेपालमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि गत चैत्र ११ गतेदेखि बन्द भएका पशुपतिनाथका ढोकाहरु भक्तजनहरुका लागि अझै खुलेका छैनन्। ढोका नखुले पनि भक्तजनको आस्था छेकिएको छैन र भक्तजनले बाहिरैबाट पुजा आराधना गरेका छन् ।
यस वर्ष साउनमा चार सोमबार परेका छन् । चारवटा सोमबार परेको साउनबाट नयाँ व्रतालुले पनि साउने सोमबारको व्रत सुरु गर्छन् । साउनको सोमबार व्रत बसेमा मनको इच्छा पूरा भई अटल सौभाग्य प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ । साउन महिनाको सोमबार शिवको प्रिय दिन मानिन्छ । त्यसैले साउनको हरेक सोमबार श्रद्धालुहरुले रातो, हरियो र पहेंलो बस्त्र तथा चुरापोते लगाएर शिवको पूजा गर्दछन् । दिनभर व्रत बसेर शिवको पूजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ ।
Nextकुन देशको पैसा बढ्यो कुन देशको घट्यो हेर्नुहोस् आजको विनिमय दर
कार्तिक २८ गते १३ वटा दियो बाल्नुहोस तपाईंको भाग्य चम्किन्छ – बिधि सहित
यी ३ राशी हुने छोरी बुहारी हुन्छन् लक्ष्मी समान, घरलाई बनाउँछन् स्वर्ग ! हेर्नुहोस् कुन कुन राशी !
एकाबिहानै आयो दुःखद खबर; कार दु’र्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु
आजदेखि फोन गर्दा पैसा लाग्दैन ! जिरो ब्यालेन्समा फेसबुक चलाउन र युट्युब हेर्न पनि मिल्ने (84107)
दुखद समाचार ! आखिर किन गरे त पारसले आत्मा हत्या ? (27666)
खुशीको खबर! बल्ल कोरना भाइरसको औषधी चीनले नै पत्ता लगायो ! (12353)
दुखद खबर! सुत्केरीको मृत्यु भएपछि धुलिखेल अस्पतालमा सतर्कता! (10232)